“Biyya tuffatan Harreen keessa garmaamu” |
Home Afaan Oromoo “Biyya tuffatan Harreen keessa garmaamu”
“Biyya tuffatan Harreen keessa garmaamu”
“Biyya tuffatan Harreen keessa garmaamu” jedha Oromoon. Hanga Oromoo tuffatan qaroo isaa keessaa dhabamsiisan. Yaalin ajjeechaa hardhaa miti HaaCaaluu irratti kan eegalte. Tan hardhaa yaalii yeroo dheeraa booda mata hidha taate.
Gaafa gurraachi Afrikaa Ameerikaa beekkamtii hin qabne #Ameerikaa keessatti ajjeefamu uummanni Ameerikaa labsii koroonaa cabsee daandii irra oolee bulee sagalee gurraacha kanaaf ta’e. Addunyaan guutun baatee ajjeechaa nama kanaa balaaleffatte. Uummanni bahee hanga masaraa White housetti mormii isaa dhageessisuun sagalee taheef. Hardha Oromoon nama guddaa qaroo ija isaa tokko of biraa dhabeera.
Haacaalun kaleessa uummata Oromoo gaafa daangaa Sumaalee irraa lolli itti baname eenyuyyuu caalaa bara #Wayyaanen biyya bulchaa turtetti sagalee uummata isaa ta’ee kan gaafa sana hin ajjeefamin hardha ajjeefamuun tuffiin Oromoo irratti godhamaa jiru daangaa darbuu isaati.
Hardha Haacaalun hin duune, akkuma obboloota isaa J. Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Jaal Nadhii Gammada fa’atti Oromummaa isaaf jedhee dhabamsiifame. Kan jiraatti du’e Haacaaluu osoo hin taane Oromoo miliyoona 50ti. HaaCaalun gootummaan wareegame. Kan jiraatti dhaabbatee du’ee reeffa ta’e warra lubbuun jirru. Bara baraan duunee awwaalamuun aadaa nutti taatee Oromi nu tuffatte.
Ajjeechan HaaCaaluu irratti raawwatamte jibba dhuunfaa isarraa qabaniif osoo hin taane jibba Oromoo fi Oromummaa irraa qabaniifi.
Previous articleVoice of Oromiyaa (Afaan Oromo Program) in Twin Cities, MN
Next articleSagalee haqaa ukkumsuu fi qabsoo ummataa daandii irraa maqsuuf